လစဉ်လတိုင်း ငွေစု အတိုးနှုန်းတွေ ရပြီ . . . - Myanmar Automobile and Equipment Directory
AYA Regular Saving (6.00% p.a.)၊ AYA Interest Maximizer Saving (6.25% p.a.) နှင့် AYA Loyal Saving (6.50% p.a.) စတဲ့ ဧရာဝတီဘဏ်၏ ငွေစာရင်းအမျိုးအစားများမှ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ဖွင့်လှစ်ပြီး အတိုးနှုန်းတွေကို လစဉ်ရယူလိုက်ကြရအောင်‌နော်။
ငွေစု အတိုးနှုန်းတွေကလည်း အများကြီး ရတာဆိုတော့ လစဉ်လတိုင်းဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် အစပျိုးရတာပေါ့။
အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက နီးစပ်ရာ ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲများတွင် လည်းကောင်း၊ 24/7 Call Center ဖုန်းနံပါတ် 01-2317777 သို့ လည်းကောင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
စိတ်ချယုံကြည်ဧရာဝတီ - Your Trusted Partner